शुक्रवार पनि डा. भट्टराई बुटवलमा घरदैलो अभियानमा व्यस्त-Nagarikaawaj.com
शुक्रवार पनि डा. भट्टराई बुटवलमा घरदैलो अभियानमा व्यस्त
बुटवल, २९ कात्तिक । एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले रुपन्देहीमा चुनावी अभियान जारी राख्नुभएको छ । संविधान सभा निर्वाचनका लागि रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ का उम्मेदवार रहनुभएका भट्टराई केही दिनदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त रहनुभएको छ ।
बिहीबार बुटवलको वडा नं. ८ मा बास बस्नुभएका भट्टराईले बिहान वार्ड नं. ८ मा घरदैलो गर्नुभएको छ ।
घरदैलोपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै भट्टराईले क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता एमाओवादीलाई मत दिन आग्रह गर्नुभयो । अघिल्लो निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नहु“दा अन्यौलको अवस्था आएको भन्दै भट्टराईले अब कत्ति पनि अलमलमा पर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
अघिल्लो निर्वाचनको परिणामका कारण कसै न कसैको बैशाखी टेक्नुपर्ने अवस्था भएकाले एमाओवादीले पनि चाहे जति काम गर्न नसकेकोले अब त्यस्ता अवस्था रहन नहुने भट्टराईको भनाइ छ । तर कसैको दुई तिहाई बहुमत नआए पनि सम्झौताको संविधान जारी गरेर भए पनि संक्रमणकालको अन्त्य गर्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिनुभयो ।
संविधानसभा निर्वाचनको मिति आउनै लाग्दा देशैभर एमाओवादीको पक्षमा जनलहर सिर्जना भएको भन्दै उहा“ले यस पटक एमाओवादीको बहुमत आउने दाबी गर्नुभयो ।
आफू अग्रगामी एजेण्डालाई जिताउन र यस क्षेत्रको विकासको लागि आएको भन्दै भट्टराईले निर्वाचनमा आफूलाई मत दिन आग्रह गर्नुभयो ।
बिहान बुटवलको वार्ड नं. ८ मा घरदैलो गर्नुभएका भट्टराईले १० बजेदेखि वार्ड नं. १२ मा घरदैलो गर्नुभएको छ । त्यसैगरी दिउसो १ बजेदेखि साढे ३ बजेसम्म वार्ड नं. १४ र अपरान्ह ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म वार्ड नं. १५ मा घरदैलो कार्यक्रम रहेको एमाओवादी रुपन्देहीले जनाएको छ ।
केही दिनदेखि रुपन्देहीमा चुनाव प्रचारमा व्यस्त रहनुभएका भट्टराईले बिहीबार बुटवलमा डाक्टर, इन्जिनियर र बुद्धिजीवीहरुसंग अन्तत्र्रिmयामा गर्नुभएको थियो । अन्तक्र्रियामा सहभागीहरुले भट्टराईलाई सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
भट्टराई बिहीबार बिहान बुटवल वडा नं ५ का विभिन्न स्थानमा घरदैलो गर्नुभएको थियो भने भट्टराईको पक्षमा माहोल बढाउन बिहीबार बुटवलमा बृहत् रिक्सा ¥याली निकालिएको थियो ।